NoFap အတွက် DOS & DON'Ts - Brain On Porn
NoFap အတွက် DOs & DONTs အချို့
တစ်လျောက်ပတ်သော Streak ပြီးနောက်ယနေ့နံနက် relapsing ပြီးနောက်ကျွန်မကောက်ဤနာရီအနည်းငယ်အသုံးပြုခငျြးကို Fapstronauts တချို့အကြံပေးချက်များ post မှနောင်တရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
'တစ် ဦး လျင်မြန်ကြည့်' ဘို့ပင်လျှင်ကျိန်းသေ မလုပ်ပါနှင့် အတိအလင်းရှင်းလင်းသောပုံများကိုကြည့်ပါ၊ bikini pic ပင် - ၉.၉ / ၁၀ သင်ပြန်ရလိမ့်မည်။ '' nuff ကဆိုသည်။
(ကျနော့်အမြင်တွင်) အစွန်းမရောက်ပါစေနှင့်။ Edge သည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်ထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးဤစိန်ခေါ်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ NoFap ကိုပိုမိုထိရောက်သောခရီးတစ်ခုအတွက်မသွားပါနှင့်။
အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်အိမ်သာဖောက်ခြင်းတို့မှ လွဲ၍ သင်၏အမှိုက်ကိုမထိပါနှင့် - NOPE မှလွဲ၍၊ ပယ်လက်အား.
အသက်တာ၌သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ရန် NoFap ကိုအားမကိုးပါနှင့်၊ ဤဖိုရမ်တွင် NoFap ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသော်လည်း၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မှန်ကန်နိုင်သော်လည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသဘာဝမှဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုလူများမမျှော်လင့်သင့်ပါ။ NoFap သည်သင်၏ဘ ၀ ကိုမည်သို့ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ရှာဖွေရန်သင်၏ ဦး နှောက်ကို reset လုပ်သည်။
စိတ်ကူးမထားပါနဲ့။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဇယားဖြစ်သော်လည်းအခြားအရာတစ်ခုခုကိုလျင်မြန်စွာအာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားပါ။ စားပွဲများသည်ကောင်းသည်။
နောက်ဆုံးတော့, UP ပေးမထားပါနဲ့! - ပြောရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် (၄) နာရီမပြည့်မီကစွန့်လွှတ်လိုက်သည်ဟုစဉ်းစားသော်လည်းခရီး၏အဓိကအချက်မှာပြန်လည်တက်။ တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကအရှုံးမပေးဘူး
တွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ တစ်ဦးပွဲချင်းပြီး Find, comfy get နှင့်သင့်စိတ်ကိုစင်ကြယ်စေ။ အဘယ်သူမျှမပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ဤလုပ်ဖို့မှားယွင်းတဲ့လမ်းတစ်ဘုံလမ်းအသက်ရှူဘို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော positioning ကိုတစ်ဖြောင့်နောက်ကျောနှင့်အတူ Cross-အတော်များများကမျက်စိထိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိပါသည်။
အေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းသမျှသောလမ်း (စာသား, ထို sh * t ကိုချလှည့်) ။ ရမ္မက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရှည်လျားသောနေ့အဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို set up မှာလည်းထူးထူးခြားခြား (ငါ့အဘို့) လျှော့ပေါ့ဖို့အန္တိမနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်ဒီဖိုရမ်သို့သွားရောက်နှင့်အခြားသူများကိုထုတ်ကူညီပေးသည်။ ဤသို့ပြုတကယ်ကသူတို့ကိုထွက်ကူညီပေးပါမည်သာပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွင်ပိတ်သောကျောက်ထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျကို setting နေကြသည်။ သူတို့အားရမ္မက်ကွာစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းအလွန်ကြီးစွာသောလမ်း။
လူတိုင်း၊ အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောသောအခါမျက်လုံးချင်းထိပါ။ လူတို့အားသင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ပေးခြင်းသည်မလိုအပ်ဟုထင်ရသော်လည်းပင်အလွန်အရေးကြီးသည်။
တတ်နိုင်သမျှလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ လှည့်ခြင်း၊ လှော်ခြင်း - လေ့ကျင့်ခန်းသည်စွမ်းအင်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဟော်မုန်းများထုတ်လွှတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကလပ်အသင်းဝင်ပါ။ လူသစ်အချို့နှင့်တွေ့ဆုံပါ၊ ပါဝင်ပါ။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် NoFap ပြီးနောက်သင်၏အထွေထွေပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည်ပြောင်းလဲလာပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ကွဲပြားစွာကြည့်ရှုမည်။ လူတိုင်းကိုဒီဟာကသဘာဝကျတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကိုသတိပေးရန်နှင့်၎င်းကိုလျစ်လျူမရှုသင့်သောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အားဤစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှပုံသွင်းရန်သင်၏အားသာချက်ကိုသုံးပါ။ နောက်ဆုံးမှာမင်းကိုဘယ်သူမှမကြည့်ချင်ဘူး၊
အပြုံး ငါတစ်ခါမှဒီလိုမလုပ်ဖူးဘူး၊ တစ်ယောက်ယောက်က 'ငါအမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်ကျနေပုံရတယ်' လို့ပြောပြီးငါပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် NoFap ပြီးနောက်မျက်လုံးနှင့်ထိတွေ့။ လူအများအား ပိုမို၍ ပွေ့ဖက်ကာပြုံးခြင်းသည်သဘာဝဖြစ်လာပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ထိုအရပ်၌ထိုသို့ NoFap ၌ငါ့9လစာလုံးပေါင်းတှငျငါအဲဒီပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်အတိတ်ကြောင့်စေရန်ရုန်းကန်နေကြသူလူတို့အဘို့ဤအနညျးငယျနေရာလေးကိုအကြံပေးချက်များနှင့်အတူရှောင်ရှားရန်အဘယ်အရာကိုသတိပေးတက် လာ. , အဘယ်အရာကိုငါထင်တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးသည်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။
LINK - NoFap အတွက် DOs & DONTs အချို့